Shiinaha ICE Nidaamka Sifeynta Cufnaanta Sare ee Soosaarida Soo-saareyaasha Wareegta Daaweynta Soo Saaraha Soo-saaraha iyo Soo-saaraha | Yubing
Filter Ciid Karti Karti Leh
Soo saarida miirayaasha ciidda waxtarka sare waxay kacaan ka rogtay sifeynta biyaha. Cunnooyinka adkaha ah ee la hakiyay ayaa hadda si qaali ah loogu qaadi karaa 1/2 maykron iyada oo leh shaandho otomaatig ah oo dib-u-dhaqasho ah Miirayaasha tiknoolajiyadda tiknoolajiyadeed ee duugga ah waxay hoos u dhacaan oo keliya illaa 10 mikroone. Maaddaama inta badan biyo-qaboojiyaha ay ku jiraan 1/2 ilaa 5 maykron oo kala duwan, miirayaasha waxtarka sare ayaa aad uga fiican inay ka saaraan suntaas dhibka badan. Shaandhaynta waxtarka badan waxay ka dhigan tahay natiijooyin si weyn loo hagaajiyay oo leh shaandho yar. Miirayaasha waxtarka sare leh ee 'ICE' waxay adeegsadaan ciidda 'ultrafine sand' si ay u siiso shaandhayntan aadka waxtar u leh. Tallaabada socodka-socodka biyaha ee dusha sare ee warbaahinta wanaagsan ayaa ka hortageysa in si dhakhso leh loogu xirto adoo ku riixaya sunta aagga kaydinta. Kaliya maahan waxtarka sifeyntu inay si aad ah kor ugu kacdo, laakiin miirayaashu waxay ubaahan yihiin ilaa 10 jeer kayar biyo dhaqid ah.
Sifaynta Waxtarka Leh ee Kharashka
Miirayaasha waxtarka sare leh ee 'ICE' ayaa si aad wax ku ool ah uga takhalusi kara walxaha aadka u wanaagsan ee minaaradda qaboojinta ka xoqeysa hawada. Waxtarkan aadka u fiicnaaday wuxuu u oggolaanayaa miirayaashaan in laga dhigo 4 ilaa 5 jeer ka yar miirayaasha multimedia iyadoo la siinayo biyo nadiifa badan. Multimedia waxay kalasoocaa dhinaceeda 5 ilaa 10% ee heerka dib udejinta, halka miirayaasha waxtarka sare kaliya ubaahan yihiin 1 ilaa 3%. Lacag haka luminin miirayaasha waaweyn ee waxtar la'aanta adoo adeegsanaya tikniyoolajiyadii hore.
Faa'iidooyinka Biyaha Sifeeysan ee Nadiifka ah
•Meelaha kala-wareejinta kuleylka nadiifka ahi waxay awood u siinayaan qalabka inay si hufan ugu shaqeeyaan taas oo keentay kharashka tamarta oo yaraada.
•Nolosha qalabka waa la dheereeyay sababtoo ah hoos u dhaca heerarka daxalka.
•Waxtarka daaweynta microbial ayaa la hagaajiyay taasoo keentay goob caafimaad oo caafimaad.
•Dayactirka qalabka iyo waqtiga aan loo qorsheynin waa la dhimay sababo nadiif ah awgeed, buuxin iyo kuleyliyeyaasha.
Xiga: ICE Nidaamka Osmosis-ka Dib-u-Celinta ee ICE ee Nidaamka Biyaha Qaboojinta
qaboojinta sifeynta biyaha
qaboojinta nidaamka sifeynta biyaha
sifeynta biyaha wareegga munaaradda qaboojinta
nidaamka sifeynta warshadaha
nidaamka sifeynta ciidda warshadaha
sifeynta ciidda ee munaaradda qaboojinta
nidaamka sifeynta ciidda